doctormalay.com ကာမ စာအုပ်များ ကာမ ဇတ်လမ်း စာအုပ်များ
Re: ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ >
Likes Received: 359 in 78 posts
07-22-2020, 01:02 AM
Written by Amiodarone
Crd to achittatkathomyakyunnyo
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ (ရွာသာကြီး) တံခါးဝသို့ Honda Fit အနီရောင် ကားလေး တစ်စီး ဆိုက်ရောက်လို့လာပါသည်။ ကားလေးပေါ်မှ ဖြူဝင်းသော ခြေထောက်လေးတစ်ဖက် မြေပြင်ပေါ်ဆင်းလာပြီး ဝတ်ဆင်ထားသော Foot chain လေး၏ ရွှေခြူလုံးလေးက အသံလေးများ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ဖြူဝင်းသောအသားအရည်နဲ့ ဆံပင်ကို ဆံတုံးထုံးပြီး ဇာပါသော အနက်ရောင် boldကလစ်လေး အုပ်ထားပါသည်။ ဒီဇိုင်နာနှင့်အပ်ပြီးမြန်မာဝတ်စုံကို ချပ်ရပ်စွာချုပ်ထားသော လိမ္မော်ရောင်ဝမ်းဆက် ဝတ်ထားတဲ့သူမဟာ လျှောက်လှမ်းသောခြေလှမ်းတိုင်းမှာ ပေါင်သားများကထင်းနေပြီး တွဲလျက် တင်သားများကလည်း အနောက်ပိုင်းအလှကို တင်းရင်းစွာ ဖော်ကျူးရုံမက အရောင်မှန်းမရတဲ့ အတွင်းခံရာလေးကလည်း တင်းပြီးထင်း နေပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ အသက်ပါနေသော သူမရဲ့ ရင်ဘက်နားက ရွှေရင်အစုံဟာ အပေါ်ကိုပင့်တက်နေပါသည်။ ဆေးရုံဝန်း သံတံခါးကို သေချာစွာ စနစ်တကျ ပိတ်ထား၍ လူတစ်ယောက်သာ ဝင်လို့ရသော တံခါးတစ်ချပ်ကို တံခါးစောင့်လေးက လှပ်ပေးပါသည်။
"အမ ဘယ်သွားမလို့လဲ။ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ချင်လို့လဲ ခင်ဗျ။"
ဝန်ထမ်းကဒ်လေး ထုတ်ပြပြီး ပြုံးရွှင်စွာ ခွန်းတုန့်ပြန်လေသည်။
"ဒီက ဆေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့ ချိန်းထားလို့ပါ။ ကျမ ဒေါက်တာ စပယ်ဖြူပါ။"
နာမည်နဲ့ လူ လွန်စွာ ပနံသင့်လှသော သူမသည် လက်ချောင်း လက်မောင်းများက ဖြူဖြူ သွယ်သွယ်။ မြားနတ်မောင်လေးကိုင်းလို့ တင်စားရမယ့် လေးကိုင်းပုံ အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်း ထူထူ။ စူးရှတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ အနည်းငယ်ကျဉ်းတဲ့ မျက်ပေါက်လေးရယ်။ ပါးလွှာပြီး ချွှန်ထွက်နေ တဲ့ မျက်ခုံးတစ်စုံ ရယ်။ ဖြောင့်စင်းပေါ်လွင်တဲ့ နှာတံလေးရယ်။ မျက်နှာပေါက်က မဝိုင်း မချွှန် အနေတော်လေး ဖြစ်တဲ့ နန်းဆန်တဲ့ အလှ ပိုင်ရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်။ သူမ ဒီနေ့လာရောက်ရခြင်း အကြောင်းက သူမ၏ ၃၂နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အလှူကို အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူ ထူးထူးခြားခြား ရွာသာကြီးမှာ ထမင်းသုံးနပ်စာ တစ်ပတ်တိတိ လှူတန်းဖို့ လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သူမသည် ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ တွင် Msc Mental Health နဲ့ ဘွဲ့လွန်ယူထားပြီး အခုလို လာရောက်လှူတန်းရင်း သူမဆက်လက် တက်ရောက်မည့် PhD အတွက်လည်း စာတမ်းပြုစုရန် တစ်ခါတည်း ကုန်ကြမ်းလာရှာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ သူမနှင့် အလွန် ခင်မင်သော သူငယ်ချင်း မြတ်မွန်သည် ဤဆေးရုံ၏ ဆေးရုံအုပ်ကြီး သမီးဖြစ်သဖြင့် ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ သူမရုံးခန်းသို့ လျောက်လှမ်းစဉ် လမ်းမှာ အကျီအဖြူ၊ လုံချည်အညိုနွမ်းလျှလျှဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်က "ငါ့ကိုပြန်လွှတ် ငါရူးနေတာမဟုတ်ဘူး ငါ့ကိုဘာလို့ဒီကိုခေါ်လာတာလဲ" ဆိုပြီးအော်ဟစ်နေတော့ သူမ ရပ်ကြည့်နေမိသည်။ Depression ဝင်ပြီး စိတ်ကစင်ကလျား ဖြစ်နေသော လူနာမှန်း သိပြီး သူမ က ထို အဒေါ်ကြီးအနားသွားကာ
"အဒေါ် နေကောင်းလား သမီးကို မှတ်မိလား"
"သိပါဘူး နင်က ဘယ်သူလဲ "
"အဒေါ်တို့ ဘေးအိမ်ကလေ အဒေါ်ကလည်းမေ့တတ်ရန်ရော အခု က အဒေါ်ကို ရူးနေလို့ ဖမ်းထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဒေါ် အိမ်က လာမခေါ်သေးလို့ပါ။ ရော့ အဒေါ် အိမ်က မုန့်ပေးခိုင်းလိုက်တယ်"
ဆိုကာ သူမ လက်ကိုင်အိတ်ထဲက ပေါင်မုန့်လေးတစ်လုံးပေးလိုက်တော့ ငြိမ်ကျသွားသည်။ သူနာပြုများက ချော့မော့ ခေါ်သွားလေသည်။
"အမယ်လေး ဘယ်သူများလည်းလို့ သမီး စံပယ်ဖြူ" ဟူသော အသံကြားတော့ စံပယ်ဖြူ လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဖြစ်နေသည်။
"ငါ့သမီးက ဘယ်ဆိုးလို့လဲ တော်တော် တော်နေပြီပဲ ။ Patient mind ကို ဖတ်တတ်နေပြီ။ "
"လာ သမီး အန်တီတို့ ရုံးခန်းထဲသွားရအောင်"
ရုံးခန်းထဲရောက်တော့ အန်တီက သူမကိုဆေးရုံ အကြောင်းရှင်းပြလေသည်။
"ဆေးရုံမှာ အမျိုးသားလူနာ ၁၀၀၀ ကျော်နဲ့ အမျိုးသမီးလူနာ ၅၀၀ ကျော် စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်လောက် ရှိတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်စဉ် စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကြီးမှာ လူနာတွေတိုးတိုးလာကြတယ်သမီးရယ် ။ ဘာကြောင့် အများဆုံးဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ အိပ်ရေးပျက်များတာ၊ မိသားစုရဲ့သောက ဒါဏ်တွေမခံနိုင်လို့ ဖြစ်ကြတာနဲ့ တစ်ချို့ကတော့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးအဆင် မပြေဖြစ်ပြီး ရူးသွပ်သွားကြတွေ များတယ် သမီးရယ် ။ ဆေးရုံရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာတော့ စိတ်ကစဉ့်ကလျားဝေဒနာရှင်တွေကို ထားတယ်။ ဆေးရုံရဲ့အောက်ထပ်မှာတော့ စိတ်ကြွ၊ စိတ်ကျဝေဒနာရှင်တွေကိုထားတယ်။ သမီးလိုက်ကြည့်ရင် သိမှာပါ။"
ဆေးရုံအုပ်ကြီး ရဲ့ ပြောပြချက်တွေကြောင့် သူမလူနာတွေကို လိုက်ကြည့်မိသည်။ အောက်ထပ် မှာရှိတဲ့ စိတ်ကြွ၊ စိတ်ကျဝေဒနာရှင်တွေထားရာ ဘက်ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ လူနာတွေက စကားတွေ ပြောကြတော့တာပဲ၊ "ဟေးနေကောင်းလား၊ လာပါ မကြောက်နဲ့ ငါက ရူးနေတာမဟုတ်ဘူး" ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ကြသည်။ သူတို့ကိုပြုံးပြတော့ ပြန်ပြုံးပြကြသည်။ တစ်ချို့တွေက စကားတွေထပ်ပြောသည်။ "ကျွန်တော်က ရူးမနေပါဘူး ကျွန်တော့်မှာ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ညနေကျရင်ပြန်လာခေါ်ရင် ကျွန်တော်ဆေးရုံကဆင်းရပြီဗျ" ဆိုတာမျိုးတွေ၊ အများကြီးအများကြီးပါပဲ တွေ့ရသည်။ သူတို့တွေက စိတ်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာပဲ အရမ်းသောင်းကျန်းကြပြီး ပုံမှန်ချိန်မှာဆို ပုံမှန်အသိအနည်းငယ်တော့ရှိကြပုံရသည်။ သနားဖို့လဲတော်တော်ကောင်းပါသည်။
နေ့လည်စာကျွေးမွေးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ပြီးပြီ သွားကြည့်ကြရအောင်ဆိုလို့ ထွက်လာသည်။ ပထမဆုံးအမျိုးသားတွေ စားတဲ့ထမင်းစားဆောင်ကိုရောက်တယ်။ အဲဒီအဆောင်မှာရှိတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေက ပိုင်ရှင်မဲ့တွေတဲ့၊ ကြားရတာကို စိတ်မကောင်းဘူး။ စောင့်ရှောက်ပေးမယ့်သူတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့သူကအစ ငယ်ရွယ်သူအဆုံးအရွယ်စုံရှိကြသည်။ ထမင်းမစားခင် သူတို့ ဆုတောင်းပေးသံတွေ အကြားမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်တဲ့ဒူးက ညွတ်ကျမလိုကို ဖြစ်တဲ့အထိ ဝမ်းနည်းရပါသည်။ အမျိုးသားထမင်းစားဆောင်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာ သူတို့လေးတွေရဲ့လက်မှုပညာနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေ လက်ကောက်၊ ဆွဲကြိုးလေးတွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာတွေ့ရသည်။ အဲဒီပစ္စည်းလေးတွေ ရောင်းရတဲ့အမြတ်ငွေနဲ့ အလှူရှင်မရှိတဲ့ရက်စားရအောင် ငါးပိရည်တွေဝယ်ပြီးသိမ်း။ အလှူရှင်မရှိရင် အဲဒီ ငါးပိရည်ကို ချက်ပြီးကျွေးတယ်လို့လဲ သိရသဖြင့် စံပယ်ဖြူ ရင်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းမိလေသည်။ သူမ၏ ကုသိုလ်မှာ လွန်စွာ မွန်မြတ်လှကြောင်း သိရသဖြင့်လည်း ဝမ်းသာမိသည်။
နောက်တော့ မိန်းကလေးအဆောင်ဘက် သွားကြည့်တယ်၊ ယောကျာ်းလေးတွေထက် မိန်းကလေး တွေ ဝေဒနာဖြစ်ပုံက ပိုပြီးတော့ ကြည့်ရမြင်ရ ဆိုးတယ်၊ သွက်လက်မှု၊ တက်ကြွမှု ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့ပဲ စက်ရုပ်တွေလို ပဲ၊ မိန်းကလေးတွေက စိတ်နှလုံးပိုနုနယ်ကြလို့ဖြစ်သည်။ အာပေးမယ့်သူမရှိ။ အဖော်မရှိ။ sexual abuse လုပ်ခံရသော သူများ ။ လင်ယောက်ျားက ပစ်သွား သားသမီးက သေနှင့် Depression ဝင်သွားသူများ။ တစ်ဖတ်နိုင်ငံရောင်းစားခံရ၍ ပြန်ရောက်လာပြီး စိတ်ကစဉ့်ကလျားဝေဒနာခံစားနေရသူများ နှင့် များပြားလှပေသည်။ထိုအချိန်တွင် ထူးဆန်းလှသော Piano သံလေးတစ်ခုကြားရပေသည်။ သာယာနာ ပျော်ဖွယ် ကောင်းလှသော သံစဉ်ကို တီးခတ်ပေးနေပြီး ပီသကြည်မြစွာ ဆိုနေသူက အမျိုးသားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဝင်းဝါသော အသားရည်နှင့် မျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းကောင်း ပေါ်လွင်လှသော နှာတံနှင့် နီမြန်းသော နှုတ်ခမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ထား၍ မေးရိုးများထင်းနေသော အရပ်အမောင်းကောင်းကောင်း အမျိုးသားတစ်ဦးကို မြင်လိုက်မိသည်။
? ဟိုးအရင်ကလိုပဲ နင်ဟာလှပဆဲ…?
? တခြားလူလက်ကိုတွဲ ခြေလှမ်းများဝံ့ထယ်မြဲ…?
? ငါပေးခဲ့တဲ့ အသည်းတစ်စုံကိုခြေအစုံမှာ?
? ပုံတော်ဖိနပ်လို ဆင်မြန်းလဲ?
? ငါကျေနပ်တယ် နင်အသေသတ်လဲ?
? ရှင်နေလျက်လို အမြဲတမ်းချစ်မြဲ…ပဲ?
? နှလုံးသားကိုဓားနဲ့တား ?
? ပခုံးနှစ်ဖက်ခြား ခေါင်းထားပေမယ့်?
? လက်ဝတ်လက်စားပေါ လျှံများတဲ့ ?
? သူဆီ သာ နင်ထွက်သွား?
? စွန်လွတ်ခြင်းနဲ့ ချစ်ပြခဲ့တဲ့ အသည်းကွဲသမား?
? ငါဟာ ?
? နင်ရွေးချယ်တဲ့ ကြင်ယာဖတ်က ပညာတတ် သူဌေးသား?
? အလိုက်တသိဘေးဖယ်တဲ့ ငါက အစိုးရဝန်ထမ်းလခစား?
? နင်ခဏနားတဲ့ ရင်ခွင်တစ်စုံကို ?
? ခြေစုံကန် ပစ်ခါ နင်ထွက်သွားခဲ့?
? ရွှေငွေမမက်ပဲ တဲအိုပျက်နဲ့?
? ထမင်းရည်အတူလျက်မယ်ဆိုတာ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လား…?
သီချင်းသံလေး အဆုံးမှာတော့ လူနာမိန်းကလေးအားလုံး လက်ခုပ်သံလေးတွေ ညံသွားသည်။ သူတို့မပြောပါနဲ့ စံပယ်ဖြူကိုယ်တိုင်ပင် လက်ခုပ်တီးပေးမိသည်။ ထို အမျိုးသား မတ်တပ်ထရပ်သည်နှင့် ဘေးက လုံခြုံရေးနှစ်ယောက်က လက်ထိပ်ခတ်လေသည်။ စံပယ်ဖြူ မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားသည်။ ဒီလို ရုပ်ရည် ဒီလို ဂီတကို လွန်စွာ ခံစားတတ်သူကို ဘာလို့ ဖမ်းရတာလဲ။ ဆရာဝန်မလေး စံပယ်ဖြူ ခေါင်းထဲမှာ အတွေးတွေချာချာလည် နေသည်။ မေးချင်စိတ်တွေ တားမရတော့ သူမဆေးရုံအုပ်ကြီးကို မေးလိုက်သည်။
" အန်တီ သူ့ကို ဘာလို့ဖမ်းထားတာလဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟင် " ။ သူမအမေးကို ဆေးရုံအုပ်ကြီးက
"သူက လူနာဆိုပေမယ့် လူသတ်တရားခံလို့ သံသယရှိလို့ အစောင့်တွေနဲ့ ထားရတာ။ အန်တီ လည်း တသက်နဲ့ တစ်ကိုယ် လူနာတော်တော်များ ကြုံလာပြီးမှ ဒီလူနဲ့မှ အံသြလို့မဆုံးဘူး။ သူဝတ်စားထားပုံက သပ်သပ်ခပ်ခပ် ဂီတပါရမီလည်းပါတယ်။ ရုပ်ကလည်းချော။ ပြီးတော့ သူက ဆရာဝန်။
"ရှင် သူက ဆရာဝန်"
"ဟုတ်တယ်သမီး ။ ဒေါက်တာ ရဲစွမ်း တဲ့ ။"
သမီးတော့ နားမလည်တော့ဘူး။ အန်တီ သမီး တစ်ခုတောင်းဆိုပါရစေ။
"ဘာလဲ သမီး "
"သူနဲ့ စကားပြောကြည့်ချင်လို့ "
"မဖြစ်ဘူး သမီး မဖြစ်ဘူး" ဆေးရုံအုပ်ကြီးက အကြောက်အကန်ငြင်းလေသည်။
"ဘာလို့လဲ အန်တီ "
"တိုက်ဆိုင်တာပဲလား ဘာလို့လဲ မသိဘူး သမီး ။ သူနဲ့ စကားပြောတဲ့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်လုံး ကိုယ့်ကိုကို အဆုံးစီရင်သွားပြီ။ "
စံပယ်ဖြူ ပိုစိတ်ဝင်စားသွားသည်။ ရဲစွမ်း ဆိုတဲ့ လူအကြောင်း ပိုသိချင်လာမိသည်။
"ဒါဆိုလည်း အန်တီရယ် သူ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းလေး ရနိုင်မလား"
"ရပါတယ်။ ဒါတော့ အန်တီ ဖန်တီးပေးမယ်နော် သမီး။ စကားတော့ မပြောပါနဲ့ သမီးရယ်။"
စံပယ်ဖြူတစ်ယောက်က မရဘူး ဆိုတာကို မရ ရအောင်လုပ်တတ်သူ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူမ တွေးနေဆဲမှာပဲ ရဲစွမ်းက သူမ ကို ကြည့်ပြီး လှမ်းပြုံးပြသွားသည်။ ထူးဆန်းလွန်းသည်။ သူ့အပြုံးက အေးချမ်းလွန်းပြီး လွန်စွာ အပြစ်ကင်းလှပေသည်။ သူမရင်ထဲမှ အရာတစ်ခု ဆွဲယူသွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ Personal data နဲ့ သူ့ရဲ့ Daily chart ကို စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေ နဲ့ သူမ ကြည့်ခွင့်ရသဖြင့် ယူဆောင်လာ ကာ အိမ်သို့ပြန်လာလေသည်။
ညအချိန်တွင်စံပယ်ဖြူတစ်ယောက် ရေချိုးပြီး ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့မှာ Body lotion လူးပြီး သူမရဲ့မင်းကြီးကြိုက် ကိုယ်လုံးလေးကို ကြည့်ပြီးကြည်နူးနေမိသည်။ Yoga ပုံမှန်လေ့ကျင့်သော သူမသည် အသက်အရွယ်က ၃၂ ထဲ ဝင်နေသော်လည်း နုပျိုနေကာ ၂၅ဝန်းကျင်လောက်ပင် ထင်ရသည်။ အတွေးတွေ နယ်ချဲ့နေတဲ့ သူမ ရဲ့ ခါးသေးသေးလေးကို တစ်စုံတစ်ယောက်က နောက်မှ သိုင်းဖတ်လိုက်လေသည်။
"ပလုတ်တုတ် ကိုကြီးရယ် လန့်လိုက်တာ။"
"ဖြူ လန့်သွားလား။ ကိုကြီးက Suprise လေး လုပ်လိုက်တာပါ။ "
သူမ ကို ခြောက်လန့်လိုက်သူက အခြားသူမဟုတ်ပါ။ သူမ ရဲ့ ခင်ပွန်း ဦးနေထွန်း ဖြစ်သည်။ ဦးနေထွန်းသည် အသားရေက ညိုညို မျက်နှာက လေးထောင့်ကျကျ မျက်ခုံး မျက်လုံး ကောင်းကောင်းနဲ့ နဖူးအနည်းငယ် ပြောင်နေသည်။ အသက်က ၄၀ လောက်ရှိပြီး လူကောင်ထွားထွားအရပ်အမောင်းက ၅ ပေ ၇ လောက်ရှိသည်။ စံပယ်ဖြူ၏ မိဘများက တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီး မိန်းမ အရှုပ်အရှင်းလည်းကင်း ငွေကြေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အရ ကား s room တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်သည့် ဦးနေထွန်းကို သဘောတူပေးစား လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးလေသည်။ ဦးနေထွန်းက စံပယ်ဖြူကို သူကိုယ်တိုင် အရင်းအနှီးထုတ်ပေးပြီး ဆေးကုမ္မဏီ တစ်ခုထောင်ပေးထားသည်။ နှစ်ဘက်မိဘများက သဘောတူကြည်ဖြူသဖြင့် စံပယ်ဖြူ မငြင်းလိုပဲ ခေါင်းငြိမ့်လက်ခံ ခဲ့ ပြီး ပေါင်းသင်းလာတာ အိမ်ထောင်သက် ၂နှစ်ပင်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
"ကိုကြီးနောက်ဆို အဲလိုမခြောက်နဲ့လို့ ဖြူ ဘယ်နှစ်ခါပြောရမလဲ"
"ကိုကြီးက ဖြူ အဲလိုလေး လန့်သွားတာကို ချစ်တာလေ"
"ကိုကြီး အနံ့ရတယ် ဘီယာတွေသောက်လာတာလား။ ကိုကြီးကလည်း ဖြူ မကြိုက်ဘူးကွာ။ အဲ အနံ့တွေ ဖြူ မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ကိုကြီးသိသားနဲ့"
"ကိုကြီး သူငယ်ချင်း Australia သွားတော့မှာမလို့ ပွဲလေးလုပ်တာ မသောက်လို့ မကောင်းဘူးလေ "
"ကိုကြီးက ဆင်ခြေပဲကွာ ဖြူ မပြောတော့ဘူး"
စံပယ်ဖြူ စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ပန်းနုရောင် ညဝတ်ဂါဝန်လေးတစ်ထည်ကို ဝတ်ဆင်လိုက်ပြီး မွေ့ယာထက် လှဲလျောင်းနေလိုက်သည်။ ဦးနေထွန်းလည်း မိမိအမှားမိမိသိပြီး ရေလျှင်မြန်စွာ ချိုးလေသည်။ ရေချိုးပြီး Roll -on တွေ သုံး Fair & lovely တွေ လိမ်း ရေမွှေးများ ဆွတ်ပြီးကာမှ လွန်စွာ အသန့်ကြိုက်တတ်သော ချစ်ဇနီးအနား ကပ်ရဲလေသည်။
မွေ့ယာပေါ် ကျောပေးထားသော ဇနီးဘေးလှဲလိုက်ပြီး-
"ဖြူ ကိုကြီးကို စိတ်ဆိုးနေတုန်းလား"
"ဟာ ကိုကြီး ဖြူ မကြိုက်တာ လုပ်တာကို ဖြူက ပျော်နေရမှာလား။ တစ်ခါလည်း မဟုတ်ဘူး ကိုကြီးရယ်။ "
"အင်းပါ ဖြူကလည်း ကိုကြီးနောင်မလုပ်တော့ဘူးနော်။ ဒီဘက်လှည့်ပါအုံး ဖြူက လဲ"
ကလေးလေး တစ်ယောက်လို ချော့မြူပြီး သူမကို တဖတ်လှည့်လိုက်ပြီး ပါးပြင်ဖွေးဖွေးကို အနမ်း မွှေးမွှေးလေးပေးလိုက်လေသည်။ သူမရဲ့ မှေးနေတဲ့ မျက်ဝန်းလေးနဲ့ ပြူးကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဦးနေထွန်းဟာ နှုတ်ခမ်းလေးကို စုတ်နမ်းနေပါသည်။ အပြန်အလှန် သူမဘက်ကလည်း ချစ်လင်ကို ပြန်တုန့်ပြန်ကာ အနမ်းများခြွေပြီး ကျောပြင်ကြီးကို ဖတ်ထားမိလေသည်။ ဦးနေထွန်းလည်း သူမခါးနောက်ဘက်လေးကို ဖတ်ထားပြီး ကျောပြင်လေးကိုပွတ်သပ်ပေးမိလေသည်။ ဦးနေထွန်းရဲ့ လက်တွေက စံပယ်ဖြူရဲ့ ခါးလေးမှ တဆင့် အောက်သို့ တဖြည်းဖြည်းလျှောလာကာ ဂါဝန်ကို လှန်လိုက်၍ပေါ်နေသော တင်သားဖြူဖြူလုံးလုံးလေး ကို ယွယွလေး ပွတ်ပေးလေသည်။ တင်ပါးလေးတွေပွတ်ပေးနေတော့ အတွင်းကလီစာတွေ ဗြောင်းဆန်ယားယံ လာသော စံပယ်ဖြူသည် အနမ်းတွေ ပိုကြမ်းလာပြီး ဦးနေထွန်းရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်သည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ မိမိဇနီးသည်၏ လိုချင်တပ်မက်မှုကို သိသော ဦးနေထွန်းသည် တင်သားလေးများ ကို တစ်ဖက် စီညှစ်ပေးလေသည်။ ကျောပြင်နှင့်တင် ဆက်နေသော နေရာက မြောင်းသဖွယ် အရာလေးအတိုင်း ဦးနေထွန်း သည် လက်ခလယ်ကိုသုံး တင်ပါးဆုံ မှီးညှောင့်ရိုးထိအောင် ကစားပေးနေလေတော့ ရင်ခုန်သံ အသက်ရှုနှုန်း မြင့်သတက် မြင့်လာသည်။ ဦးနေထွန်း အနမ်းတွေက နှုတ်ခမ်းတွေမှ လည်တိုင် ဆင်းသက်လာလိုက်တာ စံပယ်ဖြူရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကြား ခစားလေတော့သည်။ ရင်နှစ်မွှာကြားကို နမ်းရုံနဲ့ မပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကိုပါ စို့ပေးယက်ပေးလေသည်။ ခံစားမှု အပြည့်နဲ့ စံပယ်ဖြူသည် ပြောင်နေသော ဦးနေထွန်း နဖူးကြီးကို တယုတယ ပွတ်သပ်ပေးရင်း အစို့ခံကာ အရသာယူနေသည်။ ဦးနေထွန်း နှုတ်ခမ်းတွေသည် အဆီကင်းမဲ့သော ဗိုက်သား ပြင်ဖွေးဖွေးလေးသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ချက်ကလေးကို ပတ်လည်ဝိုင်းကာ လျှာဖျားလေးနဲ့ ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေ ဝေ ကစားသလို ဝန်းရံကာ ယက်လေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ချိုင့်ဝင်နေတဲ့ ချက်ကလေးကို လျှာလေးထိုးထည့်လိုက်ရင် စံပယ်ဖြူမှာ ကော့ကော့တက်လာသည်။ မုတ်ဆိတ်မွှေးနှုတ်ခမ်းမွှေး ငုတ်စိလေး များထားတတ်သော ဦးနေထွန်း၏အားသာချက်က ထိုငုတ်စိလေးများနှင့် ချက်နှင့်ဆီးခုံကြား နေရာကို ပွတ်ပေး ခြင်းဖြစ်သည်။ စူးစူးယားယား အရသာလေးက စံပယ်ဖြူတွက် ထူးထူးခြားခြား တပ်မက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ဘာဂျာ တစ်မုတ်ဆိတ်လို ပြောရမလိုပင် ဖြစ်သည်။ စံပယ်ဖြူရဲ့ ဆီးခုံမောက် မောက်လေးကို မုတ်ဆိတ်နှင့် ပွတ်ပေးချင်က ဦးနေထွန်း၏ ချစ်ဇနီးအပေါ် ချစ်ကျီစားမှု သင်္ကေတလေးဖြစ် သည်။ အဖုတ်ဖွေးရှည်ရှည်မကြိုက်တဲ့ စံပယ်ဖြူရဲ့ ပြောင်ရှင်းတဲ့ သဲသောင်ငူလေးလိုထွန်းနေတဲ့ အဖုတ်အငူ လေးဟာ ဦးနေထွန်းရဲ့ အပြုအစုတွေကြောင့် တောင်ကြားကစိမ့်စမ်းရေ စိမ့်ထွက်နေသလို ပက်ကြားအပ် အဖုတ်လေးမှာ အကျိအချွဲလေးတွေ စိုနေသည်။ မုတ်ဆိတ်အားကိုးနဲ့ အဖုတ်နှစ်ခုချပ်ကြားတစ်ကြောင်းတည်း ပွတ်ဆွဲနေတော့ စံပယ်ဖြူမှာ ခါးကော့ရင်ကော့ လက်ညိုးကို ပါးစပ်မှာကိုက် မောဟိုက်လာလေသည်။
"ကိုကြီး အင်း… ဖြူ လိုနေပြီ။ ဖြူကို မရက်စက်ပါနဲ့တော့"
ခံချင်တောင်းတတာကို ပြောပြတဲ့ အမူအရာကြောင့် ဦးနေထွန်း ဗျူဟာမြောက်တယ်ဆိုရမည်။ ခါးဝတ် ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်တော့ အမွှေးထူလပျွစ် လီးညိုကြီးက သူမ ကို ဆီးကြိုနေသည်။
"ကိုကြီးက ကွာ မကောင်းဘူး။ ဖြူ အမွှေးတွေ တအားမုန်းတာ ကိုကြီးသိရဲ့သားနဲ့ ရိတ်မထားဘူး။ "
ဟုတ်ပါသည်။ စံပယ်ဖြူက သူမကိုယ်တိုင်လည်း အဖုတ်မွှေး ဂျိုင်းမွှေး မကြိုက်။ ခဏ ခဏ ရိတ် သလို ဦးနေထွန်းကိုလည်း ရိတ်ခိုင်းသည်။
"Sorry ကွာ ကိုကြီး အလုပ်များနေလို့ ရိတ်ဖို့ မေ့နေတယ်။ နောက်ဆို ရိတ်မယ်နော်။"
"တော်ပြီး ထုပဲပေးမယ် စုပ်မပေးဘူး။ "
ဦးနေထွန်းလည်း သူ့ အပြစ်နဲ့ သူဆိုတော့ အထွန့် မတက်ရဲ။ တဟဲဟဲ ပဲ လုပ်ပြနေရသည်။ ဖွေးဥနေတဲ့ ဆင်စွယ်လို လက်ချောင်းလေးတွေဟာ ဦးနေထွန်းရဲ့ လီးကို ကိုင်ပြီး ထုပေးလေသည်။
"ကိုကြီး တော်တော်နဲ့ ကို မတောင်ပါ့လား။ ကိုကြီး ဖြူကို စိတ်မပါဘူးလား။ "
"မဟုတ်ရပါဘူး ဖြူရယ် ကိုကြီးတအားပင်ပန်းနေတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ဖြူအတွက်တော့ ကိုကြီးက Ever Readyပါ။ ပြောရင်းထလာပြီး ဖြူ အပေါ်ကပဲနေမှာလား။"
" အင်း ဖြူ အပေါ်က နေမယ်"
ထက်မြက်သော မိန်းမတို့သည် အရာရာကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဆိုသော စကားအတိုင်း စံပယ်ဖြူ သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး စိတ်ကြိုက်နေရတဲ့ Cow girl လို positionမျိုးကို သဘောကျသည်။ အပေါ်ကနေ ချယ်လှယ်ရတဲ့ အရိုင်းဆန်သောစိတ်ကလေးတွေက ထူးချွန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ မသိမသာကိန်းအောင်းသည့် သဘောရှိသည်။
စံပယ်ဖြူ ပက်လက်လှန်နေသော ဦးနေထွန်းပေါ်ကို ခွလိုက်ပြီး လိင်တန်ကို လက်နဲ့ကိုင်ကာ သူကိုယ်တိုင်ထည့်ပြီး တစ်ထစ်ချင်းဝင်အောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်ထိုင်လေသည်။ ဓားနဲ့ ဓားအိမ်လို တစ်သားတည်းကျဝင်သွားသဖြင့် ဦးနေထွန်းမှာ လွန်စွာ စည်းပိုင်းလှသော ခံစားမှုကိုရလေသည်။ စံပယ်ဖြူ လည်း အယားပြေ ဆန္ဒတွေ ပြည့်တော့သည်။ စံပယ်ဖြူက အစ ပထမ တစ်ချက်ချင်း ကနေ တဖြည်းဖြည်း နှေးနှေးမှန်မှန်သွားလေသည်။ တစ်ဝက်ထိသာ ဝင်အောင် ထိုင်ချပေမယ့် တစ်ချက်တလေ ရမက်တွေကြောင့် အဆုံးထိ ထိုင်ချမိသည်။ဦးနေထွန်းက စံပယ်ဖြူ အဆုံးထိ ထိသွားရင် ဖြစ်သွားတဲ့ မျက်နှာမှောင်လေးကြုတ် နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ထား တဲ့ မျက်နှာထားကို လွန်စွာသဘောကျနေပြီး ချစ်ဇနီး အဆုံးထိ ထိုင်မချရင်တောင် အောက်ကနေ ကော့ပေးနေမိသည်။ သွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်ဖြစ်သောသူမသည် ချစ်လင်ရဲ့ အလိုက်သိမှုတွေ ကို သဘောကျကာ စကောဝိုင်း ဝိုင်းသလို မွှေပေးပြန်သည်။ အတွင်းပိုင်းမှာရှိသော ကာမခလုတ်များကို သော့တံလှည့်ဖွင်လိုက်သလို အကြောပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ဟာ လှုပ်ရှားလာပြီး Love hormone လို့ပြောကျ တဲ့ Oxytocin ထွက်လာတော့ စံပယ်ဖြူမျက်နှာလေးတွေဟာ နီးမြန်းလာပြီး မကြာခင် ပြီးမြောက်ခြင်းorgasm ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ ပြီးခါနီးပိုအားထည့်တဲ့ သူမဟာ ဆောင့်ချက်တွေ သူမလင်လီးကျိုးမတတ်ဖြစ်လာ ပြီး ချွေးများပင် ထွက်လာသည်။ သူမ၏စိတ်ကိုသိနေသော ချစ်လင်က စံပယ်ဖြူပခုံးကို ဆွဲကိုင်ကာ အောက်က နေ အဆက်မပြတ်ပင့်ပေးလိုက်တော့
အ အ အ အကို …ကောင်း ကောင်း…အား အား အား အ အီး ရွှီး
စံပယ်ဖြူမှာ ချွေးတွေထွက်နေပြီး နှလုံးခုန်သံတွေ တော်တော်နဲ့ မငြိမ်ဖြစ်နေပါသည်။ လီးကို မချွတ် သေးပဲ ဦးနေထွန်း ကိုယ်ပေါ်မှာခွလျက် တချက်တချက် ဆက်ကနဲ တွန့်တွန့်သွားသေးသည်။ သူမ ဘက်က ဆန္ဒပြည့်သွားပေမယ့် ဦးနေထွန်းက မပြီးပြတ်သေး။ ဒါပေမယ့် အံ့သြဖို့ကောင်းတာက
"ဖြူ ပင်ပန်းသွားပြီ ထင်တယ် ကိုယ်ကြီးက မပြီးလည်း ရပါတယ် ဖြူနားအုံးနော်။" လွန်စွာ အလိုက်သိတတ်သော ခင်ပွန်းကို သူမ အရမ်းချစ်သွားပြီး ပါးလေးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းကာ အိပ်စက်လေသည်။
07-31-2020, 01:26 AM
မှောင်မဲနေပြီး အလယ်မှာ မီးသီးတစ်လုံးသားထွန်းထားသော အခန်းတစ်ခု၌ မီးသီးအောက် တည့်တည့်မှာ စားပွဲတစ်လုံးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ခုံ၂လုံး နေရာချထားသည်။ လူတစ်ယောက်သည် ထိုင်ခုံ တစ်လုံးတွင် ထိုင်နေပြီး တစ်ခုခုကို အလိုမကျဟန်ပုံပေါ်သည်။ ထိုအခန်းတွင်းသို့ လူတစ်ယောက်ဝင်လာလေ သည်။ အရပ်အမောင်းက ၆ပေဝန်းကျင် ဖြူသောအသားအရေ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ရင်အုပ်နှင့် လက်ဆစ်ခြေဆစ် ကြီးသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာအနေအထားက ယောက်ျားပီသသော မေးရိုးများထင်းနေပြီး မျက်ခုံးမျက်လုံးနက်နက် နှာတံပေါ်ပေါ် နှုတ်ခမ်းပါးပါး ဖြစ်သည်။ Uniform ကိုချပ်ရပ်စွာ bodyfit ဝတ်ဆင် ထားပြီး ပခုံးမှာငွေရောင်အပွင့်လေးနှစ်ပွင့်တင်ထားသဖြင့် ရဲအုပ်တစ်ယောက်မှန်းသိသာနေသည်။ နှုတ်ခမ်းကို တစ်ဖက်ထဲမြှင့်တက်အောင် ပြုံးပြသော ရဲအုပ်ကိုလူချောက စတင်ပြီးနှုတ်ဆက်လေသည်။
"ခင်များ ဘယ်သူလဲ ကျုပ်ကိုဘာလို့ ဖမ်းရတာလဲ။ ကျုပ်မှာ ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်ဖို့ ကိစ္စကရှိသေး တယ်။ ကလေးလည်း ကျောင်းကြိုရအုံးမယ်။ "
ဟုတ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဦးတင့်လွင်သည် လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ခန့်ကမှ ဇနီးသည် ကျန်းမာရေးကြောင့် ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသူဖြစ်သည်။ ၁၀နှစ်အရွယ်သမီးလေး တစ်ယောက်သာ ကျန်ခဲ့ပြီး ဖတဆိုးသမီးလေးကို လူ့လောကအလယ်မှာ ရုန်းကန်ကျွေမွေးစောင့်ရှောက်ရမည်မှာ ဦးတင့်လွင် အတွက် ရင်လေးစရာဖြစ်သည်။
"ကျနော့ နာမည် ရဲအုပ်ထူးမြတ်ပါ။ ဦးတင့်လွင်ဇနီး ဒေါ်မိုးမခ ရဲ့ အလောင်းကို စစ်ဆေးပြီးချိန်မှာ တွေ့ရှိသော အချက်အလက်များနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိသောအချက်များအရ ဒေါ်မိုးမခသေဆုံးရခြင်းမှာ သွေးရိုးသားရိုး ကြောင့်မဟုတ်ပဲ အသတ်ခံရတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မေးခွန်းလေးတွေ သေချာဖြေပေးပါ။"
ဦးတင့်လွင်က ထူးမြတ်စကားကို ရီမောလျက် " ခက်ရန်ရောဗျာ။ ကျုပ်တို့လင်မယားအကြောင်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင် အသိဆုံး ရန်တောင်ဖြစ်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်သတ်တယ်လို့ ဘာလို့ပြောနေတာလဲ။"
"ကျနော် ပြောနေတဲ့ အထဲမှာ ဦးတင့်လွင် သတ်ပါတယ်လို့ တစ်ခွန်းပါလို့လား အခြားသူ သတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ ဘာလို့ အဲလိုကြီးပြောရတာလဲ။"
ဦးတင့်လွင် ထူးမြတ်စကားကြောင့် မျက်စိမျက်နှာပျက်သွားပြီး သူဝန်ခံလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။
"ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဇနီးသည်က ဆုံးပါးထားတော့ စိတ်ဂယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်တာရော စိုးရိမ်စိတ် ကြောင့်ရော ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မှားပြောတာနေမှာပါ။ ကျနော်သိချင်တာလေးတစ်ခုက မမိုးမခမှာ ဘာရောဂါတွေများရှိလဲဗျ။"
"ကျနော့မိန်းမက နှလုံးအားနည်းတဲ့ ရောဂါရှိပါတယ်။ သူနဲ့ပုံမှန်ပြတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးလည်းရှိပါတယ်။ ဆေးမှတ်တမ်းတွေလည်း ကျနော်ရဲတွေကို အပ်ထားပါတယ်။"
"အော် ဟုတ်သားပဲ ကိုတင့်လွင်အပ်ထားတယ်။ ကျနော် ထူးဆန်းတာလေးတစ်ခုတွေ့ထားတယ်ဗျ။ မမိုးမခမှာ G6PD လို့ခေါ်တဲ့ မွေးရာပါဓာတ်မတည့်တဲ့ရောဂါရှိတယ်လို့သိထားရပါတယ်။ ကိုတင့်လွင်ပြောတော့ နှလုံးရောဂါပဲဆို ဒါကရောဗျ"
"ဒါကတော့ သူခဏခဏဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခဏပါပဲ။ ပြီးရင်ပြန်ကောင်းပါတယ်။ ပရုတ်လုံးနဲ့ ဓာတ်မတည့်ဘူးဆိုလို့ အိမ်မှာ တောင်မသုံးဘူး။"
"အဲ ရောဂါက ပရုတ်လုံးနဲ့ ဓာတ်မတည့်ဘူးလား။"
"ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ဆေးခန်းသွားပြီးဆေးထိုးလိုက်ရင်ကောင်းသွားတာပါပဲ။ "
"ပရုတ်လုံးအပြင် တခြားဓာတ်မတည့် ဒါတွေရှိသေးလား။ "
"ဒါတော့ ကျနော်လည်းမသိဘူးလေ။ "
ထူးမြတ်က သူယူလာသောဖိုင်ကိုလှန်ကြည့်ပြီး "ကိုတင့်လွင်က အရင်က ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှာ အလုပ်ဝင်ဖူးတယ်နော်။"
ဦးတင့်လွင် မျက်နှာ မသာမယာဖြစ်သွားသည်။ စကားလုံးများပါ အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ဖြစ်ကာ "ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ဖြန့်ချီရေးပိုင်းကပါ။ ဆေးအကြောင်းတော့ သိပ်မသိဘူးဗျ။"
"အော် ဟုတ်ပါပြီ။ G6PD က ပရုတ်လုံးအပြင် တခြားဓာတ်မတည့်တာတွေ့ရှိသေးတယ်ဗျ။ ကျနော် လေ့လာကြည့်သလောက် ငှက်ဖျားဆေး chloroquine တီဘီဆေးထဲက Isoniazide အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးတွေထဲက Phenazopyridine Vitamin C အရမ်းပေးလွန်းရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ အော် မေ့နေတာ နောက်ဆုံးတစ်ခုက Sulfa ပါတဲ့ဆေးတွေ။ "
ထူးမြတ်၏ ပြောပြချက်များကြောင့် တင့်လွင် အနည်းငယ်တုန်လှုပ်လာသည်။
"ရဲအုပ်က တော်တော်လေ့လာတာပဲ ကျနော်က ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကဆိုပေမယ့် ဆေးအကြောင်းရယ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချဖို့ရယ်ပဲ သိတာပါ။ ရောဂါအကြောင်းတော့မသိပါဘူး။
" ဒါပေါ့ ကိုတင့်လွင် ဘယ်သိမလဲ။ Nurse လေးတွေဆို သိမှာပေါ့။ ကိုတင့်လွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Companyမှာ တောင် Nurse ချောချောလေးတွေခေါ်ခန့်ထားသေးတယ်မလား။"
တင့်လွင်မှာ ထူးမြတ်ကို မျက်စိပဲ စေ့စေ့ မကြည့်ရဲ။ မိမိအကြောင်းကို လွန်စွာသိနေ၍ ပိုမိုထိပ်လန့်လာသည်။ ထူးမြတ်က ဖိုင်တစ်ခုကို ဖွင့်ပြီး တင့်လွင်ဆီ ကမ်းပေးလိုက်သည်။
"ဒါ Autopsy result (အလောင်းကိုရင်ခွဲစစ်ဆေးအဖြေ)အဲဒီမှာ ဒေါ်မိုးမခဟာ G6PD ဓာတ်မတည့်မှု ကြောင့် ရုတ်တရက်ထဖောက်ပြီး နှလုံးရောဂါကြောင့်သေဆုံးကြောင်းတွေ့ရတယ်။ ဒီရောဂါ က ပုံမှန်လူ သိပ်ပြဿနာမရှိပေမယ့် နှလုံးရောဂါနဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းသမားတွေက သေနိုင်တယ်ဆိုပဲ"
"ကျနော့ မိန်းမ ဓာတ်မတည့်တာ တစ်ခုခု တွေ့တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျနော်လည်း အတန်တန် မှာ ပါတယ်။ "
"အော် ဟုတ်လား ခင်မျာ ကိုယ်တိုင် ထည့်ပေးလိုက်ဆိုရင်ရော"
"ဟာ မဖြစ်နိုင်တာ ကျနော် ဘယ်လိုထည့်ရမှာလဲ။ ရဲအုပ်ပြောတာ တဖက်သတ် အရမ်းဆန် နေတယ်နော်။ ကျနော် ရှေ့နေခေါ်ပြီး စကားပြောချင်တယ်။"
" မပူပါနဲ့ ခင်မျာရှေ့နေနဲ့ ပြောရတော့မှာ ဖိုင်ကို နောက်တစ်ရွက်လှန်လိုက်ပါ။ ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက် အဖြေအရ ဒေါ်မိုးမခရဲ့ သားအိမ်နံရံအတွင်းမှာ သုတ်ပိုးတစ်ချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါက ခင်ဗျာ သုတ်ပိုးပဲ။ ခင်မျာ မိန်းမ မသေခင်က လိင်ဆက်ဆံထားတာတွေ့တယ်။ ပိုထူးဆန်းတာက အဲဒီထဲမှာသေချာ ဓာတ်ခွဲ ကြည့်တော့ Cotrimazole လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးတစ်မျိုးပါနေတာတွေ့ရတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် Sulfaပါတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးပေါ့။ ခင်ဗျာ အိမ်ကို မွှေနောက်ရှာတော့ ဆေးဆိုင်ကနေ ဆေးဝယ်ထားတဲ့ ဘောက်ချာတွေ့တယ်။ Cotrimazole တစ်ကဒ် ဝယ်ထားတယ်။ စကားကို ကြိုပိတ်ထားမယ်။ ဖျားတယ်လို့တော့မပြောနဲ့။ ဖျားတဲ့သူက paracetamol biogesic လောက်ပဲ သောက်တာ။ Cotrimazole သောက်တဲ့သူရှားတယ်။ ဆေးသောက်ပြီး ၆နာရီကြာရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်သွားမယ်။ သွေးကနေတစ်ဆင့် သုတ်ပိုးထဲရောက်မယ်ဆိုတာ ခင်မျာ သိနေတယ်မလား။ "
"ခင်များ ကျုပ်ကို အတင်းမစွတ်စွဲနဲ့ ကျုပ်က ဘာလို့ ကျုပ်မိန်းမကို သတ်ရမှာလဲ။ သတ်ရတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိလို့လား။"
"ကောင်းပြီလေ။ ခင်များက ဝန်မခံတော့ ကျုပ်က ထပ်ပြောရတာပေါ့။ ကိုတင့်လွင် အခု လုပ်နေတာက စားသောက်ကုန်company manger ဆိုပေမယ့် အရင်က ဆေးcompanyမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ တယ်။ အဲအလုပ်က ခင်မျာထွက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ အထုတ်ခံရတာ။ company ရဲ့ စည်းမျဉ်းအရ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်ခွင့်မရှိတာကို ခင်မျာ ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ ကြိုက်ခဲ့တာ။ သူ့နာမည်က လင်းလက်အောင်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသူနာပြုမလေးပေါ့။ ခင်မျာတောင်းပန်လို့ အိမ်ထောင်ရှိမှန်းသိလို့ ထိခိုက်မှာစိုးလို့ ခင်မျာ သူဌေးက အဖြစ်မှန်ကို ဖုံးကွယ်ပေးခဲ့တာမလား။ "
တင့်လွင်တစ်ယောက် ချွေးသီးချွေးပေါက်များပင်ကျလာသည်။ ထူးမြတ်က ဆက်လက်၍
"ခင်များက ဖောက်ပြန်တာနဲ့ အားမရ မယားငယ်နဲ့ အတူနေချင်တော့ မယားကြီးပါ သတ်ဖို့ကြံတယ်။ ခင်မျာ သတ်ချင်မှာပေါ့ ခင်မျာ မိန်းမက သူကျန်းမာရေးမကောင်းမှန်းသိတော့ GGI (Green Guardian Insurance) မှာအသက်အာမခံထားထားတယ်။ ကျန်းမားရေးမကောင်းရင် ဆေးဝါးစရိတ်ကာမိအောင်ဆိုပြီး ပေါ့။ မတော်လို့များ သူသေသွားရင် ကလေးနောင်ရေးစိတ်အေးရအောင်လည်းပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်မျာ မိန်းမက ခင်မျာထက်လည်တယ်။ ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူအကြောင်းသိနေတော့ အာမခံငွေ ဆက်ခံသူကို သမီးနာမည်နဲ့ ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရက်စက်လွန်းတဲ့ ခင်မျာက ကလေးကို ကလေးခိုးဂိုဏ်းက ဖမ်းသလိုပုံစံနဲ့ အစဖျောက်ဖို့လုပ်တယ်။ ခင်မျာက ရက်စက်တာထက်လွန်သွားပြီ ယုတ်မာတဲ့ အခြေအနေရောက်နေပြီ။ ကံကောင်းလို့ပေါ့ ကျောင်းကဆရာမက သူစိမ်းတွေမြင်ပြီး ယာဉ်ထိန်းကိုတိုင်လိုက် လို့ ကလေး ဘာမှမဖြစ်တာ။"
မီးဝင်းဝင်းတောက်နေသော မျက်လုံးများနဲ့ တင့်လွင်သည် ထူးမြတ်ကို စိုက်ကြည့်နေပြီး
"မင်းဘာသိလို့လဲကွာ။ ငါက တသက်လုံးနွားကျခံ လှည်းကျိုးထမ်းလာတာကွ။ ဟုတ်တယ် မိုးမခကို ငါသတ်တယ်ကွာ။ အဲကောင်မ G6PDရှိမှန်းသိလို့ ငါဆာလဖာပါတဲ့ ဆေးသောက်ပြီး ၈နာရီအကြာမှာ ငါလိုးပစ်တယ်။ အဖုတ်ထဲပန်းထုတ်ပြီး တစ်စက်မကျန် ဝင်အောင် ၁၅မိနစ်လောက် လီးမချွတ်ပဲ စိမ်ထားခဲ့တာ။ သူတစ်ကိုယ်လုံးပြာပြီး ဝါနှမ်းလာတဲ့အထိ အသက်ရှုကြပ်ပြီး ရပ်တဲ့ အထိ ငါ ရပ်ကြည့်နေခဲ့တာ။ အခု ကလေးက ငါနဲ့ရတဲ့ ကလေးမဟုတ်မှန်းသိရက်နဲ့ ၅နှစ်တိတိအောင့်အီးသည်းခံပြီး နွားကျခံခဲ့တာကွ။ မင်းတို့သိလား။ ကောင်မက ဘယ်ကကောင်နဲ့ ရမှန်းမသိ တဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ငါ့ကိုထိုးအပ်ပစ်တာ ဒီကလေး ၃နှစ်ကျော်လို့ သွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပြီး သွေးနဲ့ DNAစစ်မှ သိခဲ့ရတာ။ ဒါကြောင့် ငါသတ်တာကွာ။"
"ဟေ့ကောင် မဆိုင်တဲ့ သူ ဆွဲမထည့်နဲ့ လင်းလက်အောင်မှာ ဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။ သူဘာမှ မသိဘူး။ ငါယောက်ျား ငါ့အပြစ်ငါခံမယ်။ "
"Ok ပါ ခင်မျာ ရဲ့ အချစ်ကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်မျာ လင်းလက်အောင်က ခင်မျာ မသိအောင် လင်ငယ်နေရင်ရော"
"လင်းလက်အောင် ရဲ့ လင်ငယ်က မင်းမင်းတဲ့ ဒီကောင်က ဆေးသမား ငွေအမြဲလိုတဲ့ကောင် ဒါပေမယ့် မိန်းမကြမ်း အင်မတန်ကျေတယ်။ ဒီကောင်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ဖမ်းမိတော့ ဖုန်းထဲမှာ လင်းလက်အောင်နဲ့ ဆက်ဆံနေတာrecordလုပ်ထားတာတွေ့တယ်။ ကဲ ဒီ Homemade HDလေး ကြည့်လိုက် ပါအုံး။"
တင့်လွင်ဖုန်းကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ လင်းလက်အောင် ခုတင်ပေါ်မှာ ကြိုးအထပ်ထပ်နဲ့ချည်ခံထား ရသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးအဝတ်ဗလာဖြစ်နေပြီး လက်နောက်ပစ်ကြိုးတုတ်ကာ ဖင်ပူးတောင်းထောင်နေပြီးမျက်နှာ ကို ခေါင်းအုံးအပ်ထားလေသည်။ နောက်ကနေ ၆လက်မလောက်ရှည်ပြီး လုံးပတ် ၁လက်မခွဲလောက်ရှိတဲ့ လီး ကြီးနဲ့ဆောင့်လိုးခံနေလေသည်။ မင်းမင်း ဆိုသူက ညာလက်ထဲတွင် အနက်ရောင်ကြာပွတ်တစ်ချောင်းနဲ့ ဖြူဖွေးသောတင်ကို နီရဲအောင် ရိုက်ပေးလေသည်။
"ဖြန်း ကောင်မ ကောင်းလား"
"အား ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်ကွာ ရိုက်လည်းရိုက်လိုးလည်းလိုးပါ။ "
"နောက်ဆို ကိုယ်ကြီး အမြဲလိုးပေးနေမှာသိလား။ "
"သိတယ်။ အမြဲလိုးမှာကို အား အ ကောင်းလိုက်တာ စိမ့်နေတာပဲ"
"တင့်လွင့် လီးနဲ့ ကိုကြီးလီး ဘယ်သူဟာ ပိုကောင်းလဲ။"
"ကိုကြီးက ပိုတုတ်တယ် ကိုကြီးဟာပိုကြိုက်တယ်ကွာ"
"အဲကောင် ဆီက ငွေတွေရင် တို့တွေ နိုင်ငံခြားသွားမယ်။ဟိုရောက်ရင် လူမည်းbull ငှားပြီး
"ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ် အဲလီးမည်းကြီးအသံကြားတာ ပြီးချင်လာပြီ ဆောင့်ပေးပါ"
"ပေးမှာပေါ့ အား ကိုကြီးလည်းပြီးချင်နေပြီ အင့် အင့် အင့် ရော့ကွာ
"အား အား အား အ အ အ အ ……… ပြီးပြီးပြီးပြီ "
တင့်လွင် နာကျင်လွန်းလှ၍ မျက်ရည်များပင်စီးကျလာလေသည်။ မင်းဘယ်လိုများလုပ်ရက်တာ လည်းဆိုသော အတွေးက ဦးနှောက်ထဲလွှမ်းမိုးနေမှာ သေချာပါသည်။ ထူးမြတ်ရှိရာကို လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး
"ကျနော် ထွက်ဆိုချက်ပေးပါတော့မယ်။ ဒီကောင်မနဲ့ ကျနော်ပေါင်းကြံတာပါ။ "
ထူးမြတ်က နှုတ်ခမ်းကို မဲ့ပြုံးလေးပြုံးပြီးအောင်မြင်သူ အနေအထားနဲ့ အခန်းထဲမှ ထွက်လာလေ သည်။ ထူးမြတ် အပြင်ရောက်တော့ စီးကရက်တစ်လိပ်ထုတ်ကာ ခပ်ပြင်းပြင်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ပြီး အမိုးပေါ်ကိုမော့ကြည့်ကာ မီးခိုးများမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ အတွေးထဲမှာ ဒီတစ်မှုတော့ပြီးသွားပြီဟု စိတ်များ ပြေလျော့သွားသည်။
ထိုအချိန်တွင် ထူးမြတ်ဆေးလိပ်ကို ကိုင်ပြီး ရဲအုပ်တစ်ယောက်က လွှတ်ပစ်လိုက်လေသည်။ ထူးမြတ်က ဒေါသတကြီး
"ဟေ့ကောင် ကံကောင်း မင်းကလည်းကွာ တစ်ခါတလေ ဖွာပါရစေ ဟ "
"ဟေ့ရောင် တာဝန်ချိန် မသောက်နဲ့ အပြင်ထွက်မှ မင်းဟာမင်း ဖင်မီးခိုးထွက်အောင် သောက်။ ငါမတားဘူး။"
ရဲအုပ်ကံကောင်းနဲ့ ထူးမြတ်သည် ရဲသင်တန်းတစ်ခုထဲ ဆင်းခဲ့သော သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည်။
"ဘယ်လိုလဲ ငါပေးတဲ့ DATA အတိုင်းမေးတော့ ပေါ်တယ်မလား။"
"အေးကွ။ မင်းမှန်းတာ ကွတ်တိပဲ။ ဒါနဲ့ ငါမရှင်းလို့မေးပါရစေ။ မင်း ဒီကောင်က ကလေးကို ပါ အစဖျောက်မလို့ ဆိုတာ မင်းဘယ်လို သိလဲ။ "
"ငါနောက်မှ ရှင်းပြမယ်။ ငါ အခု တင့်လွင်ကို ပြောစရာလေးရှိလို့ပါ။" ဆိုကာ ကံကောင်း တစ် ယောက် စစ်ကြောရေးခန်းထဲ ဝင်သွားသည်။ ကံကောင်းက အသားရေညိုစိမ့်စိမ့် မျက်နှာရှည်ပြီး နှာတံ သွယ်သွယ် နှုတ်ခမ်းပါးပါး မျက်ခုံးပါးပါး မျက်လုံးအရောင်တောက်တောက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ် ခပ်ကျစ်ကျစ်ပုံဖြစ် သည်။ ကံကောင်းက မိမိ ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်လေသည်။
HI ကိုတင့်လွင် ကျနော်က ရဲအုပ်ကံကောင်း ပါ။ ကိုတင့်လွင် ကျနော်တို့ နဲ့ အတူတူပူးပေါင်းတဲ့ အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ တစ်ခုလေးမေးချင်လို့ပါ။ ကိုတင့်လွင် ဒေါ်မိုးမခ သမီးလေးကို တကယ်ကိုပဲ အပျောက်ရှင်းချင်တာလား ဒါမှမဟုတ် လင်းလက်အောင်ကြောင့်လား သိချင်လို့ပါ။ "
"ဒါတွေ ပြောနေလို့ ကျနော့ အပြစ်တွေ ကျေသွားမှာမှ မဟုတ်တာ။ နေပါစေ ဗျာ။ ထားလိုက်ပါတော့"
"အဲလို မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ ကျနော်တို့က ကလေးအတွက်လည်းထည့်စဉ်းစားပေးရမယ်။ ကလေး အပေါ်မှာ သံယောဇဉ် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ထည့်တွက်ပေးရမယ်။ ကလေး ကတော့ ခင်ဗျာ အပေါ်မှာ အတော်လေး သံယောဇဉ်ကြီးပုံပေါ်တယ်"
တင့်လွင် နားမလည်ဟန်နဲ့ " ခင်ဗျာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဘာပြောချင်တာလဲ။ "
ကံကောင်းက စာရွက်တစ်ရွက်ကို တင့်လွင်ရှေ့ချပေးလိုက်သည်။ "ဒါ ခင်မျာ သမီးလေး ဆုရတဲ့ စာစီစာကုံး ခင်မျာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ " တင့်လွင် လျှင်မြန်စွာ ယူဖတ်ကြည့်လိုက်သည်။
သမီးဖေဖေ နာမည်က ဦးတင့်လွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖေဖေသည် အသက် ၃၀ ဖြစ်သည်။ ဖေဖေသည် အရပ်ရှည်ပြီး အသားညိုပါသည်။ သမီးကို တွေ့လို့ရီပြရင် အစွယ်လေးများပေါ်ပါသည်။ ဒါကို သမီး အရမ်းကြိုက်ပါသည်။ ဖေဖေသည် အားသန်ပါသည်။ သမီး နှင့် မေမေ မနိုင်သောအရာများကို မ နိုင်ပါသည်။ ဖေဖေက သမီးတို့အတွက် စူပါမန်းဖြစ်ပါသည်။ ဖေဖေသည် ထူးဆန်းသောစွမ်းအားများပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ သမီး ကိုင်မိလျှင် ဓာတ်လိုက်သောအရာများကို ဖေဖေက ကိုင်နိုင်သည်။ ဖေဖေ ဓာတ်လိုက်မှာကြောက်လားမေးလျှင် ဖေဖေက လျှပ်စစ်လူသားလို့ ပြန်ဖြေပါသည်။ မေမေက အလုပ်တွေရှုပ်၍ သမီးနှင့် မကစားပါ။ ဖေဖေက အလုပ်ကပြန်လာလျှင် သမီးနဲ့ တူတူကစားပါသည်။ ဖေဖေက အရုပ်မလေးတွေ အလှပြင်ပေးပါသည်။ သမီးလောက် အလှပြင်တာ မတော်ပေမယ့် ဖေဖေကို ကစားပေးလို့ သမီး အရမ်းချစ်ပါသည်။ မေမေ က ဒေါသ အရမ်းကြီးပါသည်။ တစ်ခါတလေ ဖေဖေကို ဒယ်အိုးတွေ ဖိနပ်တွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဖေဖေက သမီးငိုနေရင် ချော့ပြီး အပြင်မှာ ပြောင်းဖူးပြုတ်ဝယ်ကျွေးပါသည်။
သမီးဖေဖေ ကို အရမ်းချစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖေဖေသည် သမီးကို နှင့်တူတူကစား ပါသည်။ သမီးစားချင်တာ ဝယ်ကျွေးပါသည်။ မေမေ ဘာလုပ်လုပ်လည်း ဖေဖေက သည်းခံပါသည်။ သမီးကို လည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဖေဖေ နှင့် မေမေ ဘယ်သူ့အချစ်ဆုံးလည်း မေးရင် ဖေဖေ ကိုသမီးအချစ်ဆုံးဖြစ် ပါသည်။
တင့်လွင်ဖတ်ရင်း မျက်ရည်များစီးကျလာပါသည်။ သမီးလေးကို မျက်လုံးထဲပြန်မြင်လာပြီး ရင်ထဲမှာ စို့တက်နာကျင်လာသည်။ တင့်လွင် ငိုနေရင်းနဲ့
"ခင်မျာ ကျုပ်ကို ဘာလို့ဒါတွေ လာပြောနေတာလည်း ဗျာ ။ ဘာလို့ ဒါတွေ လာပြနေတာလဲ။ ကျုပ်ကို ထောင်ချရုံနဲ့ အားမရလို့ ရင်ကွဲသေအောင်လုပ်နေတာလား။"
"မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်တင့်လွင် နောင်တ တရားရအောင်ပါ။ လောကကြီးက ထူးဆန်းတယ်ဗျ။ ဝမ်းနဲ့ လွယ်မွေးထားတဲ့ အမေအရင်းထက် ကိုယ်နဲ့သွေးမတော် သားမစပ်တဲ့ အဖေကိုတော့ ပိုချစ်တယ်တဲ့။ ဒီမယ် ကိုတင့်လွင်။ ဒီ ကလေးက သိပ္ပံပညာအရ ဆေးပညာအရ မျိုးရိုးဗီဇကို စစ်ဆေးတဲ့ DNAနဲ့ တိုင်းတာ လိုက်ရင် ခင်မျာ သမီး မဟုတ်ပေမယ့် လောကမှာ တိုင်းတာလို့မရ ဖော်ပြလို့ မရတဲ့ အနက်ဆုံးရှိုင်းဆုံး အရာတစ်ခုနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒါက ခင်မျာ သမီးပဲ။ အဲဒီ အနက်ရှိုင်းဆုံးအရာက မေတ္တာတရားပါ။ ခင်မျာ ဒီကလေးပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ စစ်မှန်ခဲ့လို့ ကလေးက ပြန်ချစ်တာပေါ့။ ကျနော်တို့ လူကြီးတွေက ကလေးတွေကို အသိဉာဏ်နည်းသေးတယ် ဘာမှ မသိပါဘူး ဆိုပြီး အထင်သေးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေက ဦးနှောက်ထက် နှလုံးသားက ပိုကြီးနေတာပဲ။ ဒါကို လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေ လောင်မြိုက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ လူကြီးတွေ လိုက်မမှီဘူးဗျ။ ခင်ဗျာ ကလေးကို အစဖျောက်ဖို့ လုပ်တာ လင်းလက်အောင် အကြံကြောင့်မလား။ ကလေးရဲ့ကျောင်းက ဆရာမကို အမည်မသိဖုန်းနဲ့ လှမ်းအကြောင်းကြားပြီး အသိပေးတာ ခင်မျာပါ။ အေးဗျာ ကျနော်က ကလေးမရှိတော့မသိတာပါ။ရှေးလူကြီးတွေ ပြောတာကြားဘူးတယ်။ သားက အမေကို ပိုချစ်တယ်။ သမီးက အဖေကို ပိုချစ်တယ်တဲ့ ။ အခုမှ အဲစကား ယုံတော့တယ်။ "
"ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော် မလွန်ဆန်နိုင်လို့ လုပ်မိပေမယ့် ကျနော် ဒီကလေးကို မလုပ်ရက်ဘူးဗျာ။ ဒီကလေးက ကျနော့ လက်ပေါ်ကြီးလာတာပါ။ အားလုံးကျနော့အပြစ်တွေပါဗျာ"
ကံကောင်းလည်း ငိုကျွေးပူဆွေးနေသော တင့်လွင် ကို တစ်ယောက်တည်း နေစေလိုသဖြင့် အခန်းထဲက ထွက်လာလေသည်။ အပြင်ရောက်တော့ ထူးမြတ်က
" ဟေ့ကောင် မင်းကသိလှကြီးလား။ ထားပါတော့ မင်းက အမှုလိုက်တဲ့ နေရာမှာ ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ ငါ့ထက် ကျွမ်းကျင်တာ ငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကွာ အခုက တင့်လွင်ရော လင်းလက်အောင်ရော နှစ်ယောက်လုံး ထောင်ကျမှာလေ ။ ဘာလို့ ထပ်သွားရှင်းပြနေတာလဲကွာ။ မင်းလေကုန်တယ် လူပင်ပန်းတယ် ကွာ။ "
ကံကောင်းက ထူးမြတ် ပခုံးကိုပုတ်ပြီး " ငါတို့က လူတစ်ယောက်ကို ထောင်ဒဏ် အပြစ်ဒဏ်ပေးတာ ဒီလူမှ မဟုတ်ဘူး နောင်လုပ်မယ့် သူတွေ အတုယူစရာ စံပြအနေနဲ့ လုပ်ပြတာ။ နောက်ပြီး အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ သူတွေ စိတ်ထဲမှာ အပြစ်လို့ ခံယူသွားစေချင်တာ။ အခု ငါပြောပြလိုက်တော့ သူ့အပြစ်နဲ့ သူတပါးအပြစ်ကို ခွဲခြားသိသွားသလို နောင်နောင် သူ့ လိုအမှားမျိုး မကျူးလွန်အောင် စံနမူနာအနေနဲ့ သူတခြားလူတွေကို ပြောပြလို့ရမယ်။ ဒါမှ တခြားသူတွေလည်း အသိရှိမယ်။ နောင်တစ်ချိန် သူအပြစ်တွေပေးဆပ်ပြီးလို့ ချုပ်ငြိမ်း သွားတဲ့အခါ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ဘဝကိုရှေ့ဆက်လို့ရတာပေါ့ကွ ာ" ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ပါပါပြောလေသည်။
ကံကောင်းက ဆက်လက်၍ "အော် ထူးမြတ် ငါမေးမလို့ ဒေါက်တာရဲစွမ်းအမှုက ဘာထူးလဲ။ သူ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေရော ငါတို့ ဆွဲချက်တင်လို့ ရပါ့မလား။ "
ထူးမြတ်က ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ လက်နှိုက်ပြီး "အေးကွာ ဘာမှတော့ ပြောမရသေးဘူး။ စိတ်ဝေဒနာသည်ဆိုတော့ ငါတို့ psychiatrist (စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်)နဲ့ တိုင်ပင်မှရမယ်ကွ။ အမှုအသွားအလာက ရိုးရှင်းပါတယ်ကွာ။ ယောက်ျားက မိန်းမကို လုပ်ကြံတယ်။ ဒါပေမယ့် မပိရိတော့ ငါတို့ ရဲ တွေ တွေ့သွားတယ်။ ဒါပါပဲ။ ဒီခေတ်ထဲမှာ ဒီလိုအမှုတွေများပါတယ်။ လူတွေက အမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်နေကြတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဒီကာမေသုမိတ္ဆစာရကိုပဲ ရှင်းနေရတာ စိတ်လေတယ်ကွာ။ အခုအမှုတောင် တော်တော်ခေါင်းစား လိုက်ရတယ်။
တော်သေးတယ် ငါ့ကောင်ကြီးရှိလို့။ ညအားရင် ငါလိုက် တိုက်မယ်ကွာ။"
ကံကောင်း ထူးမြတ်ကို ပြန်ဖြေပြီး ရုံးခန်းရှိရာထွက်လာခဲ့သည်။ ရုံးခန်းထဲရောက်တော့ လွန်စွာလှပ သော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရောက်နေသဖြင့် အနည်းငယ် အံ့သြမိသည်။ ကံကောင်း ပြုံးပြီးမိတ်ဆက်လေ သည်။
" ဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲ။ ကျနော် ရဲအုပ်ကံကောင်းပါ ဘာအကူအညီပေးရမလဲ ။ "
"ဟုတ်ကဲ့ ရှင့် ကျမ ဒေါက်တာ စံပယ်ဖြူပါ။ ဦးရဲစွမ်းရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အကဲဖြတ်ဖို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ psychiatristပါ။ ဒါ ကျမ ကဒ်လေးပါ။
"ကံကောင်းက ကဒ်ကလေးကို ယူကြည့်ပြီး " Dr စံပယ်ဖြူ ဟာ! ဒေါက်တာက ဘွဲ့တွေ အများကြီးပဲ အတော်တော်တာပဲ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ။ ကျနော် နဲ့ ရဲအုပ်ထူးမြတ် က ဒီ အမှုကိုကိုင်တာပါ။ ဒီနေ့ က အလုပ်များနေ တော့ ဒေါက်တာသိချင်တာလေးတွေ ပြန်ဖြေဖို့ အခက်အခဲကြုံနေလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ပါလား ဒေါက်တာကို ကျနော် အမှုအသွားအလာနဲ့ အချက်အလက်ဖိုင်တွေပေးလိုက်မယ်။ ဒေါက်တာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒေါက်တာ ကျနော်နဲ့ တွေ့ဖို့ရက်ချိန်းလိုက်မယ်လေ ကြားထဲမှာ လူနာကိုလေ့လာနိုင်အောင် တွေ့ခွင့်ထောက်ခံ စာလေးရေးပေး လိုက်ပါ့မယ်။
"အင်း ကောင်းသားပဲ ကျမလည်း လေ့လာချိန်ပိုရတာပေါ့။"
"Ok ပါ ဒေါက်တာ ဒါဆို ကျနော်ဒေါက်တာ ကဒ်ထဲက နံပါတ်လေးအတိုင်း ဆက်လိုက်မယ်။ "
"ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျမ ကို ခွင့်ပြုပါအုံးရှင့်
"ကောင်းပါပြီဗျာ" ကံကောင်းတစ်ယောက် မြန်မာဆန်ဆန် သပ်ရပ်စွာ ဝတ်စားထားသော စံပယ်ဖြူ နောက်ပိုင်းကို ငေးကြည့်ရင်း သက်ပြင်လေးချကာ
"Too beautiful ( လှလွန်းပါတယ်ကွာ)
စံပယ်ဖြူတစ်ယောက် အအေးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ထိုင်ပြီးသံပုရာရည်တစ်ခွက်မှာလေသည်။
"အမ ကို သံပုရာရည်တစ်ခွက် အချိုလျော့ ရေခဲလျော့ ဒါပဲနော်"
လှပသော သူမ Body Sturcture ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ အချိုရှောင်အစားရှောင်တာ သူမ အတွက် မမှား ပေ။ လူလေးကလှပသလို ခေါင်းမာလှသော စံပယ်ဖြူသည် ဆေးရုံအုပ်ကြီးအတန်တန်တားနေသည့် ကြားက ဦးရဲစွမ်းအကြောင်း ကိုသိလိုသဖြင့် စိတ်ကျန်းမာရေးကို အကဲဖြတ်ရန်ပင်တာဝန်ယူလိုက်သေးသည်။ ဒါကြောင့် လည်း ရဲစခန်းတွင် သွားရောက်ကာ တာဝန်ခံရဲများနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်လေသည်။ သူမ ရဲစခန်းမှ ရလာသော အမှုတွဲဖိုင်၏ ပထမဆုံး စာရွက်ကို လှန်ကာ တစ်ကြောင်းချင်းစိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုလေသည်။ ( မှုခင်းဌာန မှ ရေးထားသော အကြောင်းအရာများနှင့် ဆေးရုံမှ ရောဂါမှတ်တမ်းများသည် မှတ်တမ်း မှတ်ရာ များဖြစ်သဖြင့် စာဖတ်သူ ပျင်းရိဖွယ် မဖြစ်စေရန် ဇာတ်လမ်းသဖွယ် ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးသားလိုက်ပါသည်)
ဦးရဲစွမ်းသည် အသက် ၃၆ နှစ် ရှိပြီဖြစ်၍ နာမည်ကြီး Private Hospital တစ်ခုတွင်ဦးစီးနေသော နှလုံးအထူးကုနာမည်ကျော်ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ စကားအပြောအဆိုပြေပြစ်သော တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာ တွင် လွန်စွာ စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သော ဆရာဝန်ဟူ၍ နာမည်ကောင်းရထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဦးရဲစွမ်းတွင် ဇနီးတစ်ဦးရှိပါသည်။ သူမကတော့ ဒေါ်သိမ့်သခင်ဖြစ်ပါသည်။ အသက်က ၄၂ ဝန်းကျင်ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း အ ပြင်အဆင်ခေတ်ဆန်ခြင်း နေပုံထိုင်ပုံကလူငယ်ဆန်ခြင်း တို့ကြောင့် ၃၀ ဝန်းကျင်လောက်ဟုထင်ရသည်။ နဖူး ကျယ်ပြီး မျက်ခုံးပါးပါး မျက်လုံးမှေးပြီး နှာတံမှာ အင်မတန်ပြေပြစ်သည်။ အောက်နှုတ်ခမ်းထူပြီး အပေါ်နှုတ်ခမ်း ပါးပါး မျက်နှာပေါက်က ဝိုင်းဝိုင်းဖြစ်သည်။ အသားအရေဖြူဝင်းသလို အရပ်အမောင်းက ၅ပေ ၆ ဝန်းကျင်ရှိ သည်။ ရင်သားက လက်မ ၃၆ ၃၇ လောက်ရှိပြီး တင်ပါးက ၄၀ နီးပါးရှိသော အကိတ်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင် သည်။ ခါးကလည်း ၂၈ ၂၉ လက်မ ဝန်းကျင်ဆိုတော့ သွယ်တဲ့ အထဲမှာပါသည်။ အိမ်ထောင်သည်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးလိုက်စားသော သူမဟာ နုပျိုခြင်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းရှိလေသည်။
ဒေါ်သိမ့်သခင်သည် အင်္ဂလန်မှ စီးပွားရေးဘွဲ့ရထားသော သူဖြစ်သည်။ အနောက်နိုင်ငံတွင် ပညာ သင်ယူလာခဲ့သူဖြစ်သည့် အလျောက် အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေက သူမကိုလွှမ်းမိုးနေသည်။ မိဘမျိုးရိုးက သူဌေးမျိုးဖြစ်ပြီး ဘိုးဘွားပိုင် ပိုးထည်လုပ်ငန်း ယွန်းထည်လုပ်ငန်း ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းများကို ပိုင်ဆိုင် ထားသဖြင့် အလုပ်ပင် လုပ်စရာမလို ဆယ်သက်စားမကုန်နိုင်သော စည်းစိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးဂုဏ်နဲ့ ချမ်းသာ အင်္ဂလန်မှာအနေကြာတဲ့ Free style ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား သမီးဖြစ်သူကို မိဘများမှာ စိတ်မချ။ ရတတ် မအေးဖြစ်နေသော သူမ မိခင်က ငယ်ငယ်ကချို့တဲ့စွာ ကြီးပြင်းလာပြီး ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန်နဲ့ အောင်မြင် လာတဲ့ ဆရာဝန် ဒေါက်တာရဲစွမ်းကို သဘောကျကာ လက်ဆက်ထိမ်းမြားပေးလေသည်။ ရဲစွမ်းအနေနဲ့ မိမိဘဝ မပြည့်စုံသောကာလ မိမရှိဖမရှိ အချိန်မှာ ကျွေးမွေးပညာသင်ပေးသော အဒေါ်ရဲ့ အလုပ်ရှင်လည်းဖြစ် ကျေးဇူးရှင် ဆိုလည်း မမှားတဲ့ သိမ့်သခင် မိဘတွေ သဘောကြောင့် ခေါင်းငြိမ့်လက်ခံခဲ့သည်။ ဒီလိုနဲ့ အချစ်မပါတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခု ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါတယ်။
ဦးရဲစွမ်းက စိတ်ရှည်တယ်၊ သည်းခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်သိမ့်သခင်ကတော့ club တက်တယ်၊ party သွားတယ်၊ တစ်ချို့ပြောသံကြားတာ တစ်ခါတလေ အပြင်မှာကောင်လေးတွေနဲ့ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်တာတွေ တွေ့ရတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်တဲ့ အထိ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေရှိတယ် ကြားရသည်။ ဒါတွေကို မျိုသိပ်ထားတဲ့ ဦးရဲစွမ်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ ချိန်ကိုက်မိုင်းတစ်လုံးလို ပေါက်ကွဲတော့မယ့် ဒေါသမီးတွေက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုတိုးလာပါသည်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေပြောစကားအရ ဦးရဲစွမ်းတို့ လင်မယား ရန်မဖြစ်တဲ့နေ့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဦးရဲစွမ်းက သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်မှာ စိုးတော့ ဒေါ်သိမ့်သခင်ကို မလုပ်ဖို့ အတန်တန်မှာတယ်လို့ သိရသည်။ တစ်ခါက သူတို့လင်မယားရန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ခြံသန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ကောင်လေးဆီကသိရသည်။
"သိမ့် မင်းလုပ်ရပ်တွေက အရမ်းလွန်လာပြီ၊ ငါ့သိက္ခာက ရှိသေးတယ်လေကွာ။ ငါ့အလုပ်က သိက္ခာတရားက အရေးကြီးတယ်၊ မင်းရပ်တန်းကရပ်ပါတော့ကွာ"
" သိက္ခာတွေ အိပ်ယာတွေ ကျမနားမလည်ဘူး၊ ကျမ ပျော်သလိုနေမယ်၊ ရှင်က အဲဒီအလုပ်တွေ မှာပဲပျော်နေတာလေ ကျမကို ဂရုစိုက်လို့လား၊ "
"ဟ ငါလုပ်နေတာတွေက မင်းဂုဏ်တက်စေဖို့၊ ငါတို့ အသိုင်းအဝိုင်းဂုဏ်တက်စေဖို့ မင်းမိဘတွေ ငါနဲ့မင်းကိုပေးစားတာလည်း ဒါကြောင့်ပဲလေ၊ "
"ဘာဂုဏ်လဲ လောက မှာ ငွေက အရေးကြီးဆုံးပဲ။ ငွေရှိရင် ဂုဏ်ရှိတာပဲ၊ ငွေဆိုတာ ဒုတိယ ဘုရားသခင်ဆိုရင် ငွေကို ပိုင်တဲ့ ကျမက ဒုတိယဘုရားသခင်ရဲ့ အရှင်သခင်ပဲ၊ ရှင်ပြောတဲ့ ဂုဏ်ဆိုတာကြီးကို ငွေနဲ့ ပေါက်ဝယ်နေကျတာ တပုံကြီးပဲ၊ အဝေကြီးကြည့်မနေနဲ့ ၊ ရှင် အခုလုပ်နေတဲ့ ဆေးရုံ ကျမဆောက်ပေး တာလေ၊ ရှင့်အောင်မြင်မှုတွေက ကျမထောက်ပံ့မှုတွေ မကင်းပါဘူး ကိုရဲစွမ်းရယ်။"
ဦးရဲစွမ်း အနာပေါ်တုတ်ကျ အထိနာသွားတော့
" သိမ့်သခင် မင်းလွန်လာပြီနော်"
"ဘာလဲ ဟုတ်လို့နာတာလား၊ ကိုယ့်မိန်းမ အလိုဆန္ဒကဘာလဲ၊ ဘာကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမလဲ ဆိုတာတောင် မသိတဲ့ ယောက်ျား။"
ဦးရဲစွမ်းဒေါသထွက်သွားပြီး ဒေါ်သိမ့်သခင် လက်ကို အတင်းဆွဲကာ အိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားလေသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ခုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်ပြီး ဘောင်းဘီခါးပတ်ကို ချွတ်လေသည်။
"နင်တော်တော် ဒုတ်ကြောင်နေတာလား ကောင်မ သုတ်ကြောင်နေတဲ့ ဟာမ ကဲဟာ " ဆိုကာ ခါးပတ်နဲ့ ရိုက်လေသည်။ ခုတင်ပေါ်မှောက်လျက်သားဖြစ်နေသော ဒေါ်သိမ့်သခင်ရဲ့ တင်ပါးကြီးဟာ ဦးရဲစွမ်း ရိုက်ချက်တွေကြောင့် တုန်ခါသွားသည်။ ဒေါ်သိမ့်သခင် မှာ နာကျင်လွန်းသဖြင့် အော်နေသံများ ကြားရသည်။ ဦးရဲစွမ်းက သူမဝတ်ထားသော ထမီစကတ်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ဇာပါးပါးနဲ့ ချုပ်ထားသော အတွင်းခံ အနက်ရောင်လေး တွေ့လိုက်ရသည်။
ဦးရဲစွမ်းက "ကောင်မ နင် ဘယ်လင်လိုးတာ သွားခံမလို့ Sexy အတွင်းခံ တွေဝတ်ထားတာလဲ"
ဒေါ်သိမ့်သခင်က အရိုက်ခံရလို့ နာနေတဲ့ ကြားက
" ငါ့အိမ်က လင်က မှ မလိုးတာ ငါခံချင်တဲ့ သူနဲ့ ခံတာ နင့် စောက်ပူပါလား"
"ဟာ ဒီကောင်မ ကတော့ ကဲဟာ "
တရွှမ်းရွှမ်းမြည်အောင်ရိုက်ပြီး အပေါ် အင်္ကျီ ကိုထပ်မံဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ အပေါ်အောက်က ဝမ်းဆက် ဖြစ်နေတော့ ဦးရဲစွမ်းပိုဒေါသထွက်လာပြီး အတွင်းခံ နှစ်ခုလုံးကို ဆွဲဖြဲပစ်လိုက်လေသည်။ ကြီးမား တင်းရင်းသောတင်သားနှစ်လုံးဟာ အထိန်းအကွတ်မဲ့စွာ ခါရမ်းနေပြီး စနေနှစ်ခိုင်ဟာလည်း တွဲလွဲခိုနေပါသည်။ ဦးရဲစွမ်းက ဒေါ်သိမ့်သခင်ရဲ့ ဆံပင်ရှည်ကို စောင့်ဆွဲလိုက်တော့ ဒေါ်သိမ့်သခင် နာကျင်လှသဖြင့် ပက်လက်ပင် လန်၍ပါလာသည်။ ပက်လက်လန်နေသော ဒေါ်သိမ့်သခင်သည် ခေါင်းရင်းပိုင်းမှာခြေထောက်ရောက်နေပြီး ဦးခေါင်းပိုင်းက ဦးရဲစွမ်းဂွကြားတည့်တည့်မှာ။ ပက်လက်အနေအထားကြောင့် တောင်ပို့နှစ်ခုလို ဖြစ်နေသော နို့နှစ်လုံးကို ဘယ်ညာတစ်လှည့်စီ လက်ဝါးနဲ့ ရိုက်လေသည်။ ဒေါ်သိမ့်သခင်ထံမှ ငြီးငြူသံတွေ ထွက်ပေါ်နေ ပေမယ့် နာကျင်မှုကြောင့်ထက် သာယာမှုကြောင့် ကျေနပ်ခြင်း ရသခံစားနေရပုံပေါ်သည်။ ဦးရဲစွမ်း ဘောင်းဘီ ကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး ဖွားဖက်တော် ၇လက်မကို တစွစွနဲ့ ဂွင်းတိုက်နေသည်။ မထိတွေ့တာကြာနေပြီဖြစ်သော မိမိလင်ရဲ့ ပစ္စည်းကို မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ ကြင်စလင်မယားဘဝက ပုံရိပ်တွေ ပြန်မြင်ယောင်မိသည်။
အခုလည်း အဲဒီတုန်းကလို ချစ်ပြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့ တောင်းတစိတ်က သူမ ထိုအချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
ဦးရဲစွမ်းက အတော်ပင် မတ်တောင်နေတဲ့ သူ့လိင်တံကို ဒေါ်သိမ့်သခင် အာခံတွင်းထည့်သွင်း လိုက်သည်။
" အစ် အစ် အစ် အော့ ဝေါ အား ဟဲ ဟဲ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ။"
"ဖြေးဖြေး ဟုတ်လား နင့်လင်ငယ်တွေလိုးတာကျ အသံမထွက်ပဲ လင်ကြီးလိုးတာကျ လာတား နေတယ် ၊ ထပ်လုပ်တယ်ကွာ"
ဦးရဲစွမ်းက ပက်လက်ဖြစ်နေသော ခုတင်စောင်းနားမှာတင်နေတဲ့ ဒေါ်သိမ့်သခင်ကို အာခေါင်ထိ ထိအောင် လိုးနေလေသည်။ ဒေါ်သိမ့်သခင်ထံမှာ ပျို့တက်လာသောအသံများက အခန်းတွင်းဆူနေသလို သူမ သရည်တွေက လီးမှာ ပြဒါးသုတ်ထားသလို မီးရောင်အောက်မှာ တပြောင်ပြောင်နှင့်ဖြစ်နေသည်။ ဦးရဲစွမ်းက ဒေါ်သိမ့်သခင်ကို ကုတင်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်လေသည်။ ကုတင်ပေါ်ကနေ ခွေလျက်သား ပြုတ်ကျသော ဒေါ်သိမ့်သခင် ကို ပြန်ထူပြီး ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဆံပင်ကို အုံလိုက်ဆွဲကိုင်လိုက်တော့ သူမမျက်နှာ မော့လာပြီး ပါးစပ်အနည်းငယ်ဟသွားသည်။ ဟသွားတဲ့ ပါးစပ်မှာ လီးတပ်ပြီး ပါးစပ်ကို လိုးပြန်လေသည်။ ဒေါ်သိမ့်သခင်မှာ မခံနိုင်အောင် ပျို့တက်လာတော့ ဦးရဲစွမ်းပေါင်ကို ထုရိုက်ပြီး အတင်း ခွာလေသည်။
" အဟွတ် ဟွတ် ဟွတ် တော်တော့ ကျမမောလာပြီ"
ဦးရဲစွမ်းက ဒေါ်သိမ့်သခင်ကို ခုတင်ပေါ် ပြန်ဆွဲတင်ကာ ပေါင်ကိုဖြဲပြီး လီးကို အဖုတ်မှာ တပ်လိုက်လေသည်။
"နင့် လိုးတဲ့ကောင်တွေ ထက် သာလား ဟင် ပြောစမ်းပါအုံး"
" ရှင် မလိုးရင်တော့ တခြားလူလိုးတာခံမှာပဲ၊ အပိုတွေပြောမနေနဲ့ လိုးစမ်းပါ၊ ကျမ အဖုတ်က တအားညှစ်နေပြီ၊ ရှင်ဆောင့်ပေးတော့"
"ဆောင့်မှာ နင့်ကို စိတ်နာနာနဲ့ ကိုဆောင့်လိုးမှာ"
"လိုးစမ်းပါ အရင်တုန်းက ရှင်ကျမ လိုးတိုင်းပြောတဲ့ မြင်းလီးကြီးနဲ့ မြင်းရိုင်းလို လိုးမယ်ဆိုတာလေ မှတ်မိလား၊ ရှင်က ကျမ မြင်းရိုင်းကြီးပဲ မြင်းလိုးလိုးစမ်းပါ မြင်းကြီးရယ့်"
ဒေါ်သိမ့်သခင်ပြောသလို ဦးရဲစွမ်းရဲ့လိုးချက်တွေက မြင်းရိုင်းတစ်ကောင်ရဲ့ အဟုန်အလား ပြင်းထန် လှပေသည်။ လိုးရင်းနဲ့ ဒေါ်သိမ့်သခင် နို့တွေကိုညှစ်ထားတာ နီးမြန်းနေပြီး လက်ရာများပင် ထင်းနေသည်။ မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့တန်ဆာလို ပစ္စည်း မြင်းရိုင်းလိုခွန်အားနဲ့ ဝင်ချက်တွေဟာ ဒေါ်သိမ့်သခင်ကို မျက်ဖြူပင်လန် အောင် ကောင်းမွန်နေသည်။ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်နေတဲ့ ဒေါ်သိမ့်သခင်ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင် လို အော်သံကြီးနဲ့ ပြီးမြောက်သွားပြီး ပေါင်များပင် တဆက်ဆက်တုန်နေလေသည်။
"ဟင်း..... ကောင်းလိုက်တာ ယောက်ျားရယ် ရှင်ကျမကို အမြဲ အဲလိုလိုးနေရင် မိန်းမလိမ္မာမှာပေါ့ ယောက်ျားရယ့်၊ ယောက်ျားလှဲလိုက်နော်"
အလိုဆန္ဒတွေပြည့်ဝနေတော့ ချစ်လင်ကိုအပြစ်မမြင် ပိုပိုပြီးချစ်ချင်တာ အိမ်သူသက်ထားတွေရဲ့ စိတ်ထားဖြစ်သည်။
"မြင်းရိုင်းကြီးက ဒီနှာခေါင်းမလေးဆန္ဒဖြည့်ပေးတော့ ဒီမြင်ရိုင်းကြီးပေါ်တက်စီးချင်လိုက်တာ"ဆိုကာ ထောင်မတ်နေတဲ့ အတံပေါ် ပေါင်ကိုကားပြီးခွထိုင်ကာ အတံနှင့် အပေါက်ကိုချိန်သားကိုက်အောင် ထားပြီး ထည့်သွင်းပြီး တက်စီးလေသည်။ ဒေါ်သိမ့်သခင် ထန်နေပြီမို့ အပေါ်ကနေပေးချက်တွေက ပြင်းထန်သလို ဦးရဲစွမ်းအင်္ကျီကို ကြယ်သီးတွေပြုတ်ထွက်အောင် ဆွဲဖြဲပြီး ရင်အုပ်ပေါ်က နို့သီးသေးသေးကို ဆောင့်နေလျက် လျှာနဲ့ ယက်လေသည်။ မိမိအပေါ်မြင်းတက်စီးနေတဲ့ မြင်းစီးသမား မိမိမယားကို တင်ပါးကို တဖြန်းဖြန်းနဲ့ ရိုက်ပြီးမောင်းလေသည်။
စိတ်တွေထန် အရိုင်းတွေ ဆန်လာတော့ အပေါ်ကနေဆောင့်ပေးတဲ့ မယားကို အားမရတော့ပဲ ဦးရဲစွမ်းကုန်းထပြီး ဒေါ်သိမ့်သခင်ကို ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ လေးဘက်ထောက်ကာ တင်ပြစ်ပေးထားတဲ့ သူမ ကို ဦးရဲစွမ်းက ဘယ်ဒူးကိုထောင် ညာဒူးကိုထောက် မုဆိုးတိုက်(ကုန်းတိုက်)လိုးကွက်နဲ့ အပြီးသတ်ရန် ကြံသည်။ ပြင်းလှပါသော ဆောင့်ချက်အပြင် ဒေါ်သိမ့်သခင်က နောက်ကိုပေးချက်တွေကလည်း လွန်စွာ အောင်မြင်လှပေသည်။
"လိုးစမ်းပါ ကျမ မြင်းရိုင်းကြီးရယ် ရှင့်လီးကြီးနဲ့ "
"အား ပြီးချင်နေပြီ အ အ အ "
" ကျမလည်း ပြီးတော့မယ် မြင်းကြီးရယ် ဆောင့်ဆောင့် အ အ အ အ"
ဦးရဲစွမ်းလည်း သတ္တဝါဆိုးကြီးအလား အော်ဟစ်ငြီးတွား ပြီးဆုံးသွားပြီး အဖုတ်ထဲကို သုတ်ရည်တွေ အပြည့် ပန်းထည့်လိုက်လေသည်။
ဦးရဲစွမ်းတို့လင်မယားသည် ထိုသို့အနေအထားများရှိသော်လည်း မြင်းရိုင်းကြီးထက် နွားသိုးများကို ပိုကြိုက်တဲ့ ဒေါ်သိမ့်သခင်က အရင်အတိုင်းမပြောင်းလဲပေ။ တစ်ခါတလေ အိမ်ကိုညပြန်မအိပ်၊ မိုးလင်းမှ ပေါ်လာတတ်သည်။ ဒီလို အဖုအထစ်တွေကြောင့် လင်မယားကွာရှင်းပြတ်ဆဲဖို့ အထိဖြစ်လာလေသည်။ သို့သော်လည်း ဦးရဲစွမ်းအနေနဲ့ ကွာရှင်းနိုင်ပေမယ့် ဒေါ်သိမ့်သခင်က သဘောမတူ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက လင်မယားကွဲလျှင် ဥပဒေအကြောင်းအရာအရ ပိုင်ဆိုင်မှုက တစ်ယောက်တစ်ဝက်။ မိမိနှင့်လက်ထပ်တုန်းက လက်ဗလာနဲ့ ဦးရဲစွမ်းကို သူမပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ဝက်ခွဲပေးရမှာမလိုလား။ နောက်တစ်ခုက ဦးရဲစွမ်းက သူမရဲ့ ပွဲတက်အဆောင်အယောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သူမအခုတွဲနေတာတွေက အပျော်သပ်သပ်သာဖြစ်သည်။ ဒါတွေကပွဲမတိုး။ ဦးရဲစွမ်းလို ဆရာဝန်ကြီးကမှ သူမအတွက် တင့်တယ်သည်။ ဒါတွေကြောင့် ဒေါ်သိမ့်သခင် မကွာပေးနိုင်ဖြစ်နေသည်။ ဒီလိုနဲ့ ကြာလာတော့ အမုန်းတရားတွေ ရင်ထဲတဖြည်းဖြည်းပွားများလာသည်။
တစ်နေ့တော့ ဒေါ်သိမ့်သခင် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတော့ ခရီးသွားဖို့ အကြောင်းပေါ်လာသည်။ စစ်ကိုင်းနဲ့ မန္တလေးက ပိုးထည်တိုက်တွေ ပြဿနာတက်နေသဖြင့် သူမသွားမှရမည်ဖြစ်သည်။
"ကိုရဲစွမ်း ကျမ မနက်ဖြန် ခရီးသွားမှာ အဲဒါကားကို ရှင်သေချာစစ်ပေးအုံး"
"အေးပါ ငါကြည့်ပေးပါ့မယ်၊ မင်းသာသေချာကြည့်မောင်း၊ ကားမောင်းရင် Safe belt မတပ် အရှိန်တင် နဲ့ မင်းသာသေချာမောင်း"
ဦးရဲစွမ်းမှာ ဝါသနာကြီးတစ်ခုရှိသည်။ အဲဒါက ကားပြင်တာ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကားမောင်းတာနဲ့ ကားပြင်တာကို လွန်စွာ ဝါသနာကြီးသူုဖြစ်သည်။ အိမ်က ကားများကို သူကိုယ်တိုင်ပြင်သည်။ တခြားလူ မပြင်ရ။ ကား modern အသစ်ထွက်တာနဲ့ ဦးရဲစွမ်းက ကားလဲစီးနေကြ။ အဲသလောက် ဝါသနာထုံ သည်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒေါ်သိမ့်သခင် ခရီးသွားမှာကို သူကိုယ်တိုင်ပြင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်နေ့ ဒေါ်သိမ့်သခင် ခရီးထွက်သွားသည်။ ဦးရဲစွမ်းစိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ်နေသည်။ ပိုးထည်တိုက် ကိစ္စတွေ စိတ်မဝင်စားတဲ့ မိန်းမက အခုမှ အရေကြီးလို့ဆိုပြီး ရုတ်တရက်သွားတာမသင်္ကာစရာ။ လင်ငယ်နဲ့ နောက်မီးသွားလင်းတာဖြစ်ဖို့ များကြောင်း တွေးမိနေပုံရသည်။ တစ်ခုခုဆိုလိုက်သွားပြီး အမိဖမ်းမည်ဟု စိတ်ထဲတေးထားလိုက်သည်။
ဦးရဲစွမ်းလူနာများနေသဖြင့် ဆေးရုံမှာ ညနက်သွားသည်။ အိမ်ပြန်ဖို့ ကားparking နေရာရောက် တော့ ရဲကားတစ်စီးရောက်လာလေသည်။ ကားထဲက ရဲနှစ်ယောက်ထွက်လာပြီး
"2I/ 70321က ဦးရဲစွမ်းကားလား ခင်ဗျ"
"ကျနော့ အမျိုးသမီးကားပါ၊ ဘာများရှိလို့ပါလဲ"
"မန္တလေးသွားတဲ့ အမြန်လမ်းပေါ်မှာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်လို့ပါ"
"ခင်ဗျာ ဘာ ဘာ ဖြစ်သွားသေးလဲ မသိဘူး"
"ကားက ဘရိတ်ပေါက်ပြီး မှောက်သွားတာပါ၊ အရှိန်ကြောင့် ဆီတိုင်ကီပါကွဲပြီးပေါက်သွားပါတယ်၊ အဲဒါ ကျနော်တို့ လာအကြောင်းကြားတာပါ"
ဦးရဲစွမ်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ လိုက်လာပြီး အလောင်းကိုကြည့်ပါသည်။ ဖြစ်ပွားပုံအရ အရှိန်မထိန်းနိုင် ဖြစ်၍ ကားဘရိတ်ပေါက်ကာ မှောက်သွားပုံရသည်။ အလောင်းမှာ မီးလောင်ကျွမ်းပြီးပျက်ဆီးနေပေမယ့်ရသော လက်ဝတ်ရတနာများမှာ ဒေါ်သိမ့်သခင် ပစ္စည်းများဟုတ်မှန်ကြောင်း ဦးရဲစွမ်းကအတည်ပြုပေးလေသည်။ ဦးရဲစွမ်းလည်း လင်မယားသံယောဇဉ်ကြောင့် အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပုံရသည်။ ဒီလိုနဲ့ ကိစ္စများအားလုံးလုပ် ပေးပြီး နာရေးအတွက် ပြင်ဆင်လေသည်။ ဒေါ်သိမ့်သခင် နာရေးမှာ လွန်စွာမှ စည်ကားလှပေသည်။ ဦးရဲစွမ်းရဲ့ ဂုဏ်သတင်းအရ ဒေါ်သိမ့်သခင်ရဲ့ ကြွယ်ဝမှုတွေအရ လာသူတွေ မနည်းပါ။ ထိုပွဲသို့ မျက်နှာစိမ်း နှစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပါသည်။ တစ်ဦးက အသားရေ ညိုစိမ့်စိမ့် နောက်တစ်ဦးက အသားဖြူဖြူ အရပ်မြင့်မြင့် ။ အသားညိုညိုနဲ့တစ်ယောက်က
"ကျနော် ရဲအုပ်ကံကောင်းပါ၊ဒါက ရဲအုပ်ထူးမြတ်ပါ၊ ဦးရဲစွမ်းကို ဒေါ်သိမ့်သခင်ကို သတ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရပါမယ်၊ကျနော်တို့နဲ့ စခန်းလိုက်ခဲ့ပါ"
Forum Jump: Private Messages User Control Panel Who's Online Search Forum Home ဇတ်ကားများ -- ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ မြန်မာဓါတ်ပုံများ Myanmar Photos -- မြန်မာဓါတ်ပုံများ ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။ Myanmar Photos အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇတ်ကားများ vip forum -- အရမ်းမိုက်တဲ့ဇတ်ကားတွေရှိတယ် vip room -- စျေးကြီး ရှားပါး ဇတ်ကားများ -- တရားဝင် ဆယ်ကျော်သက် ထူးရှယ် အခန်း ElITE VIP -- ထူးရှယ် ဇတ်ကားတွေ VIP ELITE SECTION မန်ဘာဝင်များ အတွက်သာ -- မြန်မာတွေ အတွက် သီးသန့် -- ဝဘ်ဆိုက်နဲ့ ပတ်သတ်သမျှ ကာမ စာအုပ်များ -- ကာမ ဇတ်လမ်း စာအုပ်များ asianscandal -- အာဆီယံ ဇတ်ကားများ asian scandal အခမဲ့ ကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းရာနေရာ -- အခမဲ့ကြော်ငြာပါ Special Thailand -- VERY GOOD THAILAND FOODS
Current time: 08-05-2020, 03:18 PM Powered By MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.